Ukusebenza kwe-massage kuye kwambalwa kuqinisekiswe. Akusetyenziswanga kuphela kwizonyango, kodwa kunye neenjongo zokwenza izimonyo ukubuyisela ukunyaniseka kwesikhumba nokuphelisa utshintsho olunexesha elidala. Ngoncedo lokusikwa, ungabuyisela izicubu zesisu, ubomeleze, okuya kwenza ulusu lube luphilile. Ukuhlamba ubuso kunye nentamo kungenziwa ngeendlela ezininzi-kwedwa okanye kwi-salon. Kubalulekile ukuba ukhethe okulungileyo kwaye uhambe kuyo yonke inkqubo yeenkqubo.
Ukususela eGrisi yamandulo, ubuso kunye nentamo ye-massage yenziwe ngesandla. Le yindlela yokuhlaziya i-classical test and test test. Inokwenziwa ngokuzimeleyo nakwi-cabin. Ukusilalisa ngokulula kulula ukunambitha imibimbi kunye nokususa ukuvuvukala. Kufuneka uyenze ngeminwe yakho. Ukunyuka kokukhanya kufuneka kuhlambulule isikhumba phakathi kwendawo ebusweni ukuya kumida, kungcono ukuba ukhilimu ophuculisayo okanye ukondla usetyenziswe ngexesha lokusila. Ngoko isikhumba asilimazi. Ukuphumelela okukhulu, inkambo yokubilisa i-massage kufuneka ibanjwe ngamaxesha amabini ngonyaka, ubude bekhosi bukhethwa ngabanye - kungaba yinyanga, kwaye mhlawumbi iiveki ezi-2 ukuya kwe-3. Ubude benkqubo nganye kuxhomekeke kulolu hlobo, kodwa ngokuqhelekileyo aludluli kwisiqingatha seyure.
Olu hlobo lobuthaka lufanelekile kubanikazi beengxaki zesikhumba. Ukuqhafaza kwimibala yobuso kunye nentamo kunye nomsantsa kunye nesithupha kuphucula ukuhamba kwegazi, kusebenze iinkqubo ze-metabolic kwiinkalo ezinzulu zolusu. Ukukhuthazwa kunye nomsebenzi weengqungquthela ezihlambulukileyo. Oku kuya kunceda ukulahla izibhunqa kunye nokubomvu, kubalulekile ukutshintsha ama-tweaks ngokutshiza kunye nokungahambi ngaphaya kwemigca yokupakisha, ungaluli kwaye ungalimazi ulusu. Ukuxiliswa kuqhutyelwa zizifundo, kodwa unokwenza 2 - 3 amaxesha ngeveki ngaphandle kwekhefu ukugcina umphumo.
Ukubuthwa kobuso kunye nentamo kungenziwa nje kuphela ngoncedo lwezandla, kodwa kunye nokuthatha inxaxheba kwezobuchwepheshe bwanamhlanje. Amaza e-ultrasonic angene kwiindawo eziphantsi kakhulu kwesikhumba, atshintshe iiseli. Ngalo ukusilalisa, awukwazi ukukrazula nje imibimbi okanye iimpumlo, kodwa ukwandisa ukuphumelela kwezi zixhobo eziqhele ukuzisebenzisa. Inkambo yokuxilisa, njengomthetho, ayigqithisi iinkqubo ezili-10, unokwenza kaninzi ngonyaka.
Enye indlela ephumelelayo yokubutha ubuso kunye nentamo, oya kwenza yona-uyayicoca ngeqhwa. I-Ice iyanciphisa i-pores, ikhupha ikhumba kwaye iphucula i-microcirculation yegazi kuwo onke amanqanaba enyama. Kukulungele ukwenza i-decoction yamachiza amayeza, uyihluze kwaye uyifake. Emva koko i-massage kunye neqhwa iya kuba nempembelelo yokwelapha. Iimpawu zeqhwa kufuneka zihlanjululwe ubuso kwisistim setyhula, zenze i-compress eshushu kwaye isebenzise i-moisturizer.
Ekubeni kukho iingongoma ezininzi ezichaphazela ngandlela-thile imeko yesikhumba nomzimba wonke. Inkosi iyazi kakuhle ezi ngongoma, ngoko ke lolu hlobo lokusilalisa lungcono kwi-salon. Isiseko salo sisekuncineni ukuba ukucindezela inkosi kukuchaphazela inqaku elifanayo imizuzu emininzi. Oku kunceda ukomeleza isikhumba, ukuphelisa okanye ukuthintela ukubonakala kwemibimbi , gcina ubuso obunqamle obushushu.
Zininzi iindlela zokuhlamba ubuso kunye nentamo. Naluphina - zombini iifayili kunye neendidi ezizikhokelo zokudibanisa ziyasebenza. Ukukhethwa kwenkqubo kuxhomekeke kwimiba yesikhumba kunye neengxaki ofuna ukuzisombulula. Ikhumba elomileyo elivuthiweyo, i-massage ye-hardware ifanelekile ngakumbi, kunye nolusu lolutsha nolutsha lungaluphi na uhlobo lwe-massage olumkelekileyo olwamkelekileyo. Kulungile ukuba ukusilalisa akukho naluphi na ukuphikisana, ukuba kuphela kwenziwa ngumphathi usebenzisa iindlela zobugcisa.
Ukucoceka kobuso beeMpawu
Indlela yokuphatha isikhumba somntu kwikhakiti?
Mask Face Face
I-hormonal face cream: ingozi kunye nokuzuza
I-cocktail yekhofi (Mokko)
Isaladi ye-Cheese "Kwitheyibhi yokutya"
Izixhobo zesilingo: ukuqokelela ukwenziwa kwe-NARS Orgasm 2017
I-Cheesecakes kwibheyili ephindwe kabini
Isaladi kunye nomsila omnyama kunye ne-veal
I-crusts i-chocolate kunye ne-ukhilimu nama-strawberries
Ikhekhe le-carrot eneinaninxebe kunye namantongomane
Ukunyamekela kakuhle indlu yokuhlambela